Phaung Daw Oo School Free Charged Specialist Clinic, 19 Street, Nanshae, Aungmyaetharzan Township, Mandalay, Mandalay (2019)
Home > Myanmar > Mandalay > Phaung Daw Oo School Free Charged Specialist Clinic
Phaung Daw Oo School Free Charged Specialist Clinic
Shwe Na D - Diagnostics And Healthcare
62nd Street, between 24th and 25th Streets
Sitagu Mawriya Āyupāla Tikicchālaya Hospital
Dr.K Aesthetic and Age Management Clinic
30st Between 58*59 st
Ingyin Phyu Hospital
[email protected], Mandalay,Rupar Mandalar Resort
No.(A-15), Corner of 53rd & 30th Street, Chan Aye Thar Zan Tsp,
Orchard Aesthetique Clinic Mandalay
No.16, Corner of 32nd and 65th road
30st, Bet 70st & 71st
Du Wun Specialist Clinic and Diagnostic Centre
No. 73, 28th Street between 73rd and 74th Street, Chan Aye Tharzan Township.
31st Street , Bet 69 &70 Street
33rd street, Between 68th and 69th street.
Kannar st, Yangon
I Doctor MDY
35 street between 66x68
No.1Plastic Surgery Center - Mandalay
37 Street, Pyinmana
Phaung Daw Oo School Free Charged Specialist Clinic is the Medical Department of Phaung Daw Oo School in Mandalay & provides FREE Health Care for everyone.
The Phaung Daw Oo School Free Charged Specialist Clinic
The Phaung Daw Oo School Free Charged Specialist Clinic is the Medical Department or Heath Care Department of Phaung Daw Oo Monastic Education High School and it's provided free health care for students, teachers, monks, novices and for needy people regardless of whether they are rich or poor, Buddhist or any other religions.
The clinic is open to everybody who needs care. For this care, no money is charged. It was founded in 2003 by the German NGO ‘Foerdervererein Myanmar’, and has ever since been financed by it. Locals as well as people from far away visit our clinic and receive free treatment and medication. Often, more than one hundred patients are treated per day. Volunteer doctors work in our clinic: general practitioners, physician, eye specialist or eye surgeon, dentists and pediatrician. They are assisted by sixteen nurses. There are special consultation hours in the evening for our novices and monks, conducted by the nurses only. They treat daytime minor injuries – some of our novices are still very young – and dandruff, which is unfortunately very common amongst the students.
All our doctors are supported by western doctors who conduct major campaigns. Recently, for example, two Australian eye specialists tested the eyesight of about 500. Defunct, untreated eyes are common in Myanmar. A prominent Swiss dentist examined the teeth of most of our school children inasingle session. Our own doctors also perform eye operations and treat bad teeth onaregular basis. The school clinic ,of course, works in close co-operation with the Burnet Institute and the 3D-project.
Moreover, the clinic provide treatment ART and other Opportunist Infection for HIV people thorugh funding from 3D Fund which are under Phaung Daw Oo project (PHPP and Javika).
*Remark: The Burnet Institute, 3D-Project or 3D Fund Program were finished.
Nowadays, We have tree main sections _ General, Eye and Dental.
General section is open everyday from 8:00 AM to 4:00 PM the whole week but Saturday Evening is see by the Physician and Sunday evening is off.
The School Clinic is running by Foreign Donors and Local Donors.
Tuesday is for Eye OPD (Out Patient Department) and Monday is Eye Operation.
And so do Dental Clinic.
-သန်း၄၅၀ သော လူတွေဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ ခံစားနေကြရပါတယ်…
-၁၅၄သန်းသော လူတွေဟာ စိတ်ကျရောဂါ ခံစားနေကြရပါတယ်…
-သန်း ၅၀သော လူတွေဟာ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ ခံစားနေကြရပါတယ်…
-လူ ၄ယောက်မှာ ၁ယောက်ဟာ
တချိန်ချိန်တော့ စိတ်ကျန်းမာရေး ချို.့ ယွင်းမှု
-၉၁ သန်းသော လူတွေဟာ
အရက်နဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ စိတ်ရောဂါ ခံစားနေကြရပါသတဲ့…
-၂၅ သန်းသော လူတွေဟာ
-၁၅ သန်းသော လူတွေဟာ
မူးယစ်ဆေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ စိတ်ရောဂါတွေ
"သင့် စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ…"
#Psychology for All
20 ideas for healthy menu 😍😍 Let’s try!
Healthy #Foods you should eat everyday.
7 breakfasts that will help you keep fit. Withaunique taste! 🍓🥝🥑🥚🍳
Useful ways of first aid in emergencies that you'ld know 🆘👍
Mix The Ingredients and Apply It on Your Face. Leave it on for 20 - 30 Minutes, Then Rinse The Face With Lukewarm Water
8 best time to drink water 💧💧💧
မျက်စိဌာန ၁၀ နှစ်ပြည့် ဂုဏ်ပြုပွဲ
အဖြေ။	လည်ပင်းကျီးပေါင်းရောဂါ ဟုခေါ်သော (cervical spondylosis) သည် လည်ပင်း အရိုးလေးတစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကြားတွင် ရှိသော Intervetebral disc များ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ပါးလွှားလားပြီး ထို လည်ပင်း အရိုးလေးများပေါ်တွင် (new bone formation) အရိုးအသစ် သေးသေးလေးများ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ထွက်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် အဆစ်များတောင့်တင်းလားခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ အာရုံကြောများကိုသွားဖိမိလျှင် နာကျင်ခြင်း စသည် ဝေဒနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ လည်ပင်းကျီးပေါင်းရောဂါသည် (degenerative process) အချိန်ကြာသည်နှင့်အမျှ တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပို၍ ဆိုးရွားသွားသော ရောဂါ အမျိုးအစားထဲတွင်ပါဝင်သည်။ ထွက်လာသော အရိုးအသစ်လေးများရှိနေသရွေ့ လည်ပင်ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း ဝေဒနာကို ဆက်လက်ခံစားနေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအရိုးသစ်ကလေးများကို ခွဲစိတ်ခြင်း ဖြင့် ဖယ်ရှားနိုင်မှသာလျှင် ရောဂါ ဝေဒနာများ အရှင်းပျောက်မည်ဖြစ်သည်။ အကြံပြုလိုသည်မှာ လေကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးလျှင် ဝေဒနာသက်သာနိုင်ပြီး။ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများကို တာရှည်အသုံးပြု သောက်သုံးမည်ဆိုလျှင်လည်း အစာအိမ်အနာမဖြစ်ရလေအောင် အစာအိမ်ကာကွယ်ဆေး နှင့်တွဲဖက်သောက်သုံးသင့်ပါသည်။ အဆစ်အတွင်းသို့ ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်လည်း နာကျင်မှုဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်ပါသည်။ (Dr. Sun)
irrawaddy.com Buddhishist monk Sayadaw U Nayaka, who leads Phaung Daw Oo Monastic School in Mandalay, has received this year’s Citizen of Burma Award.
Phaung Daw Oo Specialist Clinic
မျက်စိ အဆုံး နားအရှုံးတဲ့
မျက်စိ ကွယ် စေ သော အကြောင်းများ
၃ မျက်ကြည် လွှာ အနာ ဖြစ်ခြင်း
၄ ထိခိုက် ဒါဏ်ရာ
၅ ဗီတာ မင် အေ ချို့ တဲ့ခြင်း
ဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ်ပေါ်ကအမည် နှင့် မိမိရှေ့တွင်ထိုင်နေသော အဖွားအို ကို တိုက်ဆိုင်၍ အကဲခတ်ကြည့်မိသည်။အသက်က ၈၆ နှစ်...ညိုညိုသွယ်သွယ်
အေးဆေးသော ဟန်အမူအရာရှိ၏။မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးမှ မျက်မှန်စမ်း
သပ်ရန် ညွှန်းကြားချက်ဖြင့် ကျနော်ထံရောက်လာသူ.........
အမေဒေါ်အေးပုံ၏ ဘယ်ဘက်မျက်စိကို ဤဖောင်တော်ဦးမျက်စိအထူးကုဆေး
ခန်းတွင်ပင် အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ပေးထားပြီး အောင်မြင်သောကုသ
လည်း ခွဲစိတ်ကုသရန်မလိုအပ်သေးသောကြောင့် မျက်မှန်တပ်သင့်ကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးမှမှတ်ချက်ပြုသောကြောင့် ကျနော်ထံသို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
အနည်းငယ် စိတ်ပူပန်နေဟန်ရှိသော ထိုအမေကို သက်သာရာ ရရာရ
ကြောင်း အလာပ သလာပ စကားအနည်းငယ်ပြောဆိုပြီးနောက် လုပ်ငန်းသ
ဘောသဘာဝအတိုင်း မေးခွန်းအချို့ကို ကျနော်မေးပါသည်။
မေး။ ။အမေ... အဝေးကြည့်နဲ့ အနီးကြည့် နှစ်မျိုးမှာ ဘာကိုပိုပြီးအသုံးများသ
ကျနော့်စိတ်ထင်မှာ အသက် ၈၆ နှစ်ရှိသော အဖွားအိုတယောက်အဖို့
ပြင်ပသို့အသွား အလာလည်းနည်းလိမ့်မည် သို့အတွက် အဝေးကြည့်ပါဝါကို
အသက်အရွယ်ကိုငဲ့လျက် တိတိကျကျပေးရန်မလို...အိမ်တွင်းခြံတွင်း ထင်ထင်
ရှားရှာမြင်ရုံမျှသာလိုအပ်မည်။အနီးကြည့်တွင်လည်း ထိုနည်းတူစွာပင် ကျောင်း
သူ/သား များကဲ့သို့ အသုံးများမည်မဟုတ်၍ ဖတ်၍ မှတ်၍ သင့်ရုံမျှလိုအပ် လိမ့်
မည် ဖြစ်၍ မျက်မှန်ပါဝါကို ချင့်ချိန်ပေးရန် စဉ်းစားမိ၍ မေးခြင်းဖြစ်၏
ဖြေ။ ။ နှစ်မျိုးစလုံးသုံးချင်တယ် သား.....အဝေးကိုတော့ဆွမ်းခံကြွလာတဲ့
သံဃာတွေနဲ့ သံဃာတန်းထဲမှာ ကိုယ်ရဟန်းခံထားတဲ့ စာသင်သားသံဃာပါ
မပါ ကြည့်ချင်လို့......အနီးကတော့ အမေက အုန်းတံမြက်စည်းလေးတွေ စည်း
ပြီးရောင်းတာမို့ အုန်းလက်သင်(သပ်)တဲ့အခါ နဲ့ စည်းတဲ့အခါမှာ ထင်ထင်ရှား
ဒီလိုလေသားရဲ့..အမေ့မှာ သားသမီးတွေရှိပါတယ် သူတို့ကလည်း
အမေ့စားဝတ်နေရေးအတွက် လုံလုံလောက်လောက် ထောက်ပံ့ကြပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ အမေ့ချွေးနည်းစာလေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ငွေရှာပြီး သံဃာတော်တွေကို
ဆွမ်းလောင်းချင်တာနဲ့ အုန်းတမြတ်စည်းလေးတွေစည်းပြီး ငွေရှာတာရတာပါ
မနေ့က(၂၆/၇/၁၆)ရက်တွင် ဖောင်တော်ဦးမျက်စိဆေးခန်း OPD ၌ ဆုံတွေ့
ခဲ့ရသော အမေ ဒေါ်အေးပုံအား ဤစာဖြင့် ဦးခိုက်ပူဇော်လိုက်ပါ၏....
**ဘိန်းပါတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး လျှော့ချဖို့ခက်နေ**
ယခုဖော်ပြလိုတဲ့ ဆေးပညာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းဆေးရုံတွေမှာ လူနာတွေကိုအနာသက်သာစေတဲ့ဆေးအဖြစ် ဘိန်း (opium) ပါတဲ့ဆေးတစ်ချို့ကို အသုံးပြုခြင်းခွင့်ပြုထားတဲ့သတင်းပါ။ ဒီလိုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက် ဒီလိုဆေးတွေနဲ့ကုသခံဖို့ အရေးပေါ်ဆေးရုံတက်ကြတဲ့လူနာတွေဟာတစ်နေ့မှာ ၁၀၀၀ ထက်မနည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုသုံးစွဲကြတဲ့အတွက် အစိုးရရဲ့ Department of Health and Human Service (DHHS) အဖွဲ့ကြီးရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CMS လို့ခေါ်တဲ့ Centers for Medicare and Medicaid Services ဆိုတဲ့အဖွဲ့က ဆေးရုံတွေအတွက် ဆေးဖိုးသွင်းရတဲ့ငွေတွေဟာ ၁.၅ ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါလို ဝေဒနာတစ်ခုခုခံစားရပြီး ကိုက်ခဲနာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားနေရသူတွေမဟုတ်ဘဲ ဒီလိဘိုန်းပါတဲ့အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ထိုးပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့လူနာတွေကို ဒီဆေးမျိုးမပေးချင်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းပြပြီး ပေးသုံးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီဥပဒေပေါ်လာတဲ့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကပဲစပြီး ဆေးစွဲမှုပြဿနာ ပိုမိုပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်စစ်တမ်းများအရ ဆေးလွန် (overdose) ဖြစ်ပြီးသေးဆုံးရသူ ၄၇၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအထဲက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ opioid ဆေးလွန်ကဲမူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီသေဆုံးနှုန်းဟာ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ခုနှစ်သေဆုံးမှုထက် ၂၇.၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဆေးပညာရှင်တွေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုးကား။ ကြေးမုံသတင်းစာ ၂၄.၇.၂၀၁၆
Want your business to be the top-listed Clinic in Mandalay?
19 Street, Nanshae, Aungmyaetharzan Township, Mandalay
Other Medical Centers in Mandalay (show all)
No. 56, 75 Street, Between 27 & 28 Streets
Spring Special Clinic & Diagonosis Center @ Mandalay
နှလုံးလှပင်လယ် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၊ မန္တလေး
No (128), 27 St; 76x77 St; Mandalay